ProtonVPN: Yakanaka VPN yeLinux | Linux Addicts
ProtonVPN - Yakanaka VPN yeLinux
Isaac | 14/05/2022 14:25 | Zvirongwa, Resources
Kana iwe uchitsvaga yakanaka VPN yekugovera yako GNU/Linux iyo inoshandawo kune yako Android nharembozha, iwe unofanirwa kufunga nezveProtonVPN. Kwete chete nekuti Proton, kusiyana nevamwe vanopa verudzi urwu rweyakavanzika network, ine mutengi ane GUI yeLinux, izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kune avo vashandisi vasingawirirane zvakanyanya neiyo terminal uye vasingade. kuita mirairo yekumisikidza kana kudzima VPN. Zvakare, iwo maCLI-based clients anopedzisira ave kunetsa dzimwe nguva, uye unopedzisira waita script kugonesa, kudzima kana kusarudza maseva aunoda nenzira yakazvimiririra.
Zvakanaka, izvo zvapera neProtonVPN. Kana iwe uchida mutengi wekuraira iwe unayo, asi iwe unayo zvakare mune graphical mode senge mune mamwe ese anoshanda masisitimu. Mukuwedzera, zviri nyore kwazvo kushandisa, uye iwe unongofanira kusarudza sevha kana nyika yaunoda kubatanidza, tinya bhatani, uye voila, iwe uchava nekuchengetedzwa kwese kweProtonVPN pane network yako, ne Yakavanzika IP uye yakavharidzirwa traffic, pamwe nekukwanisa kudzivirira zvimwe zvirambidzo nenzvimbo dzenzvimbo kana censorship..
Asi sezvandakataura, iyo GUI mutengi app haisi yega. chikonzero chekusarudza ProtonVPN, Pane zvimwe:
Iyo yakavakirwa muSwitzerland, munharaunda yeEurope uye nemitemo yekuvanzika yenyika ino yagara ichizivikanwa nekusarerekera kwayo.
GUI yeLinux, kuita nyore, kumisa kana kubata iyo VPN muLinux.
Mutengi app zvakare kune mamwe masisitimu anoshanda, senge iOS uye Android nharembozha.
Kugona kwekuisa pane router, kuchengetedza ese maturusi akabatana nayo.
Mitengo inonzwisisika inotangira kubva kuSevhisi Yemahara, kuzvirongwa zvakaita seBasic pa €4/mwedzi, Plus pa €8/mwedzi uye Visionary pa €24/mwedzi. Uye kana ukaita kondirakiti ye1 kana 2 yemakore, une zvidzikiso zvekusvika pa33%.
Iine kukurumidza kukuru (kusvika ku10 Gbps).
Zvinopfuura 1700 maseva akagoverwa munyika 63.
Chengetedza mauto-giredhi encryption. Iine AES-256 algorithm, 4096-bit RSA kiyi kuchinjanisa, uye HMAC ine SHA384.
Kusvikira ku10 yekubatanidza panguva imwe chete zvichienderana nehurongwa hwakasarudzwa.
Hapana logs policy yekuwedzera zvakavanzika.
Tsigiro yeP2P yekurodha, BitTorrent, nezvimwe.
Ad blocking neNetShield tekinoroji.
Tsigiro yekutepfenyura masevhisi seNetflix, Amazon Prime, nezvimwe.
Secure Core, tekinoroji inopa kuchengetedzwa kwakanyanya.
VPN pamusoro peTor inogona kushandiswa.
Kushandisa yakachengeteka VPN mapuroteni akadai OpenVPN, IKEv2, WireGuard.
Iyo data diki yainochengeta pamaseva yakavharirwa zvizere, kuitira kusazivikanwa kukuru uye kuvanzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » ProtonVPN - Yakanaka VPN yeLinux
Yakakosha iyi vpn, ndinoishandisa zuva nezuva, 100% yakakurudzirwa
Sonority: mutambo wevhidhiyo wakamirirwa kwenguva refu wave kutosvika